ဇာနည်မာန်| January 7, 2013 | Hits:1,913
| | ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းက KNU ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးနှင့် အဖွဲ့ကို တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
မြဝတီမြို့မှာ အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ DKBA တိုက်ပွဲဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေစဉ် ကာလ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် DKBA တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရက္ခိုင့်တပ်မတော်အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးရန် အောက်တိုဘာတွင် မသေချာကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ UNFC အပေါ် ဝေဖန်ချက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ထိခိုက်နိုင်
pps၁၂၃၄၅ January 7, 2013 - 8:13 pm နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူး ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ကို သမ္မတကြီးက ဘာတွေပြောခဲ့လို့လဲ။
Reply U Tin Win January 7, 2013 - 10:54 pm KIA နဲ့ KIO ကိစ္စ မှာ.. ရှေ့ဆက့်မဲ့ ညှိနှိုင်းရေးကို ကြိုဆိုပါတယ်.. နှစ်သစ်ကူးး.. သတင်းကောင်းတခုလို့.. ၀မ်းမြောက် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်… ရှက်ကြစေချင်ပါတယ်.. အားလုံးမြန်မာတွေပါ.. မတည့်ရင် ခဏပေါ့… လက်သည်းဆိပ်ရင်.. လက်ထိပ်နာကြမှာလေ…
Reply zotung chin January 8, 2013 - 1:18 am လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တိုင်း OK တယ်လို့ မထင်မိလိုက်ပနဲ့အုံး ။ မြွေဆိုတာ ရှာနဲ့သေချာ လျှက်မှ မြိုနေတာနော် KNU ရဲ့
Reply Oak Soe January 8, 2013 - 2:26 am A lot of lives and blood of Ethnic groups will not be in vain. Because of that there will not be trust and believe on Myanamr government anymore. So, Karen leaders has just sympathy on their own people and then they chosen this way for only peace but not to trust Myanmar government.